Guluf colaadeed cusub oo ka curtay waqooyiga Itoobiya | KEYDMEDIA ONLINE
Guluf colaadeed cusub oo ka curtay waqooyiga Itoobiya
Xoogaga kacdoonka Tigreega ayaa guluf colaadeed xooggan ka biilaabay koofurta gobolka, kadib markii ay natiijada doorashiiyinkii dhacay bishii hore muujiyeen inuu ku guuleysatay Abiy Axmed.
ITOOBIYA - Ciidamada Tigreegu waxay sheegeen in ay billaabeen guluf cusub oo ay ku qaadayaan goobaha ay ciidamada Fedaraalku kaga sugan yihiin gobolka ay colaaduhu halakeeyeen ee woqooyiga Itoobiya, laba todobaad kadib markii ay Dawlada dhexe ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah, oo ka dhalatay culeys ka yimid jabhadda.
Afhayeen u hadlay ciidamada Tigreega ayaa u sheegay wakaalada wararka ee AFP in ay qabsadeen Alamata, oo ah magaalada ugu weyn koonfurta Tigray, kadib dagaal billawday Isniintii, Getachew Reda wuxuu sidoo kale sheegay in dagaalku ka socdo galbeedka Tigray.
Ciidamada Difaaca Tigreega, ayaa bishii la soo dhaafay ku faafay qaybo badan oo ka mid ah waqooyiga Itoobiya, waxayna qabsadeen magaalo madaxda gobolka ee Mekele, kadib siddeed bilood oo isku dhacyo arxan darro ah ay la galeen ciidamada Federaalka.
Dagaalkan ayaa laga soo calaamadeeyay xasuuq ba’an iyo tacaddiyo xagga galmada ah oo baahsan, waxaana lagu dilay kumanaan qof, halka Qaramada Midoobay ay sheegtay in boqolaal Kun ay qarka u saaran yihiin macluul daran.
Isku dhacyada cusub ayaa qarxay laba maalmood kadib markii natiijada doorashada ay muujisay in Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed uu ku guulaystay cod aqlabiyad leh doorashadii dalkaas ka dhacay bishii Juun ee la soo dhaafay.
Hoggaamiyeyaasha jabhadda ayaa todobaadkii hore sheegay inay aqbaleen xabad joojinta mabda’ ahaan, hayeeshee, waxay soo bandhigeen shuruudo adag oo ay ka mid tahay in gobolka laga saaro ciidamada ka socda dalka Ereteriya iyo goboka Amxaarada.
Abiy ayaa ku guuleystay Abaalmarinta Nabadda ee Nobel, sannadka 2019, kadib dadaalkiisii ku aaddanaa isu soo dhawaanshaha Itoobiya iyo Eritrea, hayeeshee sumcaddiisa ayaa dhulka gashay, kadib markii uu ciidan u diray Tigray bishii Nofeembar ee la soo dhaafay si meesha looga saaro Tigray People’s Liberation Front (TPLF).